Boliska oo ka welwelsan xagjariin ku soo xoogeysatay Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Odins soldater oo waddooyinka Göteborg habeynkii wareegaya. sawir: Carina Holmberg/Sveriges Radio
Boliska oo ka welwelsan xagjariin ku soo xoogeysatay Sweden
La daabacay fredag 8 april 2016 kl 11.51
Dhaqdhaqaaqyada xagjariinta midig ayaa ku soo xoogeysanaya Sweden. Koox iskugu wacda Soldiers of Odin ayaa ka mid ah kooxa xagjariinta ee waddanka ku baahaya.
Kooxdan ayaa magaalooyin badan oo Sweden ka mid ah ayaa habeynadii ku wareegta wadooyinka si ay u sugaan amniga iyo deganaashaha sida sheegteen. Laakiin boliska ayaa ku tilmaamay kooxdan kuwo qatar ku ah bulshada iyo demokeraatiyadda.
– Waxaan nahay ilaaliyaal wadeni ah, koox ahaan ayaa magaalada u wareegnaa si aan dadka u caawino, ayuu yeri nin ka tirsan kooxdan isku magacowdey askarta Odin, magaalada Göteborg.
Sabab laydiin kugu baahanyahay?
– Wargeysyada waxaa laga aqristaa dhibaatooyin badan oo dhaca, sida gacan ka hadal iyo kufsi…
Goor denbe oo habeynimo ah, wadada Avenun magaalada Göteborg. 30 meeyo rag ah oo koox koox u socda ayaa ayaa wareegaya bartamaha Göteborg. Waxay ku labisan yahiin dhar madow, saraawiisha tuute ah iyo jaakado madow oo ay dhabarka uga qoran tahay Solders Of Odin Göteborg, askarta Odin.
Laakiin shegashadooda ah in ay ilaaliyaan amniga wadooyinka ayaa boliska ku tilmaamay mid qatar ku ah bulshada demokeraatiga ah.
– Waa mid leh dhibaatooyin kaloduwen leh. Iyaga ayaa amni xubi abuuraya waayo aragtidooda waxay ka duuleysaa shisheeye naceyb, dhanka kale amni sugida waa howl-sha boliska ma ahan howl-sha dadyowga noocaan ah, ayuu yeri Erik Siverbo oo madax ka ah waxda sirdoonka boliska Göteborg.
Soldiers of Odin waxa dalka Finland ku aasaasey nin nasiiste caan ah, kadibna ururka waxuu ku baahay waddamo badan oo waqooyiga Yurub ku yaala. Faceebook-ga laanta ururka Sweden waxaa la socota 7000, iyagoo laamo ku leh 20-tameeyo goobood oo waddanka ah. Deegaano badan Swede ka mid ah kooxdan waxay ka sameeyaan wareeg ilaalo habeynkii.
Qaar badan oo ka mid ah kooxdan waxay horey uga mid ahaan jireen kooxa xagjariinta midigta, iyadoo kuwo badan oo ka mid ah denbiyo lagu helay oo la xukumay.
Sida laga soo xigtay iskuwaha ka hortaga xagjariinta rabshoolayaasha ah kooxdan Odins Solders waxay tusaale u yahiin ku soo xoogeysiga waddanka dhaqdhaqaaqyada xagjriinta midig.
– Isha ayaan ku heynaa wxyaabaha ay kooxahaan sameynayaa, waxaan diyaar u nahay in aan tilaabo ka qaaddno hadeyn qalalaase keenaan, ayuu Erik Siverbo
– Waa in aan isha ku heyno kooxaha noocaan ah, hadey kobcan waxay dhibaato u keenayaan bulshada, waana arrin u taala bulshada oo dhan in ay fahaan waxa keena soo badashada kooxa noocaan ah ayuu yeri Erik Siverbo oo waxda sirdoonka u qaabilsan boliska Göteborg.